के १९८६ का सबै रेकर्ड तोड्न लागेको हो दार्जिलिङको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले ?
३० अषाढ २०७४
दार्जिलिङमा जारी आन्दोलन आज २९ दिन पुगेको छ । तर पनि दार्जिलिङमा आन्दोलनले छेउटुप्पो पाएको छैन । केन्द्र सरकार मौन छ भने राज्य सरकारले निरन्तर चरम दमन गरिरहेको छ । यता आन्दोलनकारी पनि कुनै हालतमा पछाडी हट्ने संकेत देखिएको छैन । जसले गर्दा यस अघिको गोर्खा ल्याण्डको आन्दोलनमा भएको ४० दिनको बन्दको रेकर्ड तोडिने संभावना बढेर गएको छ । १९८६ मा भएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका क्रममा…विस्तृत समाचार »
एमाले नेता सवार गाडी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, चार जनाको अवस्था गम्भीर
२९ अषाढ २०७४
२९ असार, धनुषा ।जनकपुर–ढल्केवर सडकखण्डमा स्कुल बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको जिप ठोकिँदा एकको मृत्यु भएको छ भने नौ जना घाइते भएका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका–१४ मुजेलियास्थित बाबा पेट्रोल पम्प नजिकै उत्तरतर्फबाट आउँदै गरेको ना १ प ४८०५ नंको स्थानीय मोनाष्टिक स्कुलको बस र जनकपुरतर्फबाट गइरहेको को १ च ८५१७ नंको स्कारपियो जिप ठोकिँदा सिरहाको लहान नगरपालिका–१२ की ललिता चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । …विस्तृत समाचार »
एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप : मधेशको विकास नहुनुमा मधेशवादी दलका नेता नै जिम्मेवार
२९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मधेस र मधेसी जनताको विकास नहुनुमा मधेसबादी दलका नेता नै जिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार काठमाडौमा भएको साक्षत्कारमा अध्यक्ष ओलीले तराई–मधेसका जिल्लामा प्रशस्त बजेट छुट्याइने गरेपनि अपेक्षित विकास हुन नसकेकोमा आफुलाई समेत चिन्ता लाग्ने गरेको बताए । ओलीले भने “विकट पहाडी जिल्लामा समेत ९५ प्रतिशत साक्षरता छ तर सुगम भनिने तराईका जिल्ला शिक्षा,…विस्तृत समाचार »
अज्जब नेपालको गज्जब कहानी : १२५९ सांसदलाई जागिर खुवाउनी !
न्यूजसेवा टिप्पणी मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई स्थानीय तहको तेस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी गराउन सहमति खोज्ने विषयमा मंगलबार भएको बालुवाटार छलफलमा फरक खाले मिसमास प्रस्ताव आएको छ । राजपालाई स्थानीय तहमा सहभागी गराउन संविधान संशोधनको मुद्दाबाट नेताहरु भड्किएर निकाल्न खोजेको प्रस्ताव थियो, ‘प्रतिनिधि सभामा सांसद संख्या अहिलेकै राखिदिने । अर्थात, आगामी संघीय संसद्को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संख्या २४० नै राखिदिने ।’ यो…विस्तृत समाचार »
प्रहरी भन्छ : दैनिक २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु असावधानीका कारण
२९ असार, काठमाडौं । वर्षातको समयमा मुलुकभर नै प्राकृतिक समस्या छन् । कहि प्रकृतिका त कहि मानिस आफना सचेतना कारण हरेक क्षण मानिसहहरुले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार विभिन्न कारणले बुधबार ज्यान जानेको संख्या २० छ । अधिकांशको मृत्यु हुनेमा खोला र बाढीले बगाउनुका साथै डुवेर भएको छ । प्रहरीको विवरणमा १७ जिल्लाका २० जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । प्रहरीको रेर्कडमा हरेक दिन…विस्तृत समाचार »
मन्त्रीपरिषद् विस्तारको तयारीमा देउवा, माओवादीले मन्त्रीको नाम टुंग्यायो, कांग्रेसमा विवाद
२९ असार काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्री परिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । विस्तारको तयारी गरेपनि कांगै्सले पार्टी भित्रको विवादका कारण मन्त्रीको नाम टुंग्याउन सकेको छैन । यता सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले भने मन्त्रीहरूको टंगो लगाएको छ । माओवादी मात्र मन्त्री हुने नयाँ अनुहारदेखि सदावहार मन्त्रीको अनुहारसम्मका नाम परेका छन । माओवादी केन्द्रीय सचिवलायले अन्तिम पटक मन्त्रीको नाम टुंगो लागेका मन्त्रीहरुमा महेन्द्रबहादुर शाही…विस्तृत समाचार »
यौन उत्पीडनका अनेक रुप, बस यात्रा गर्ने महिलालाई सोध्नुस् यौन उत्पीडनको अनुभव
एक जना युवक र युवती भिडभाडयुक्त बसमा यात्रा गरिरहेका थिए । बसमा एउटा पनि सिट थिएन । त्यसैले दुवै जना उभिएका थिए । यत्तिकैमा अचानक युवतीले भनिन्– ‘तपाईको गोजीबाट केही कुराले मलाई घोचिरहेको छ ।’ केटाले भन्यो–त्यो मेरो तलब हो । केटीले तत्काल भनिन्–तपाईको तलब हरेक दुई मिनेटमा दुई गुनाले बढ्छ कि के हो ? यो जोक तपाईमध्ये धेरैले सुन्नु भएको हुनसक्छ, प्राप्त गर्नुभएको र…विस्तृत समाचार »
​सावधान ! छैठौं पटक जैविक विनाशको युगमा प्रवेश गर्दैछ पृथ्वी
ताममान र मौसम अनुकल बन्न नसक्दा डायनोसरको अस्तित्व समाप्त भयो । अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्न नसक्दा पटकपटक विभिन्न प्राणीहरु विलुप्त भैसकेका छन् । एक प्रजातिको अन्त्य र अर्को प्रजातिको उदय भैरहेको छ पृथ्वीमा । तर, प्राणिजगतको सबैभन्दा उन्नत विचार भएको मानव जातिको अति अतिक्रमणका कारण सिंगो पृथ्वी नै संकटमा पर्दै गएको वैज्ञानिकहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् । मानवीय अतिक्रमका कारण बढ्दै गएको ‘क्लाइमेट चेन्ज’ले भोलिको…विस्तृत समाचार »
मेयर राणाको पहिलो योजना : ‘नेपालगन्जको ढल सफा गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने’
बाँके । स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो काम गर्न सुरु गरिसकेका छन् । संघीय स्वरुपको संविधानअनुसार यसपाला जनप्रतिनिधिहरुलाई कैयौं धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसैकारण, निर्वाचनताका पार्टीहरुले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्दै चुनावी मार्केटिङ पनि गरेका थिए । विजयी जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानीय तहलाई समृद्धि बनाउने भनेर निर्वाचन अघि गरेको वाचालाई पुरा गर्न कसरी गर्न सकिन्छ भनेर…विस्तृत समाचार »
४५ जना नेपाली कतारमा अलपत्र, आफ्नै कम्पनी भन्दै ७० लाख उठाएर चितवनका रविन्द्र अधिकारी फरार
पूर्णिमा न्यौपाने, दोहा । रोजगारीको सिलसिलामा कतार पुगेका ४५ जना नेपाली अलपत्र परेका छन् । राजधानीस्थित बसुन्धारामा रहेको म्यानपावर राप्ती प्लस मेनपावरले लाखौँ रूपैयाँ उठाएर कतारमा रहेका नेपालीलाई अलपत्र पारेको हो । मेनपावरले ९५ हजारदेखि २ लाख ७० हजारसम्म ठठाएर विदेश उडाए पनि उनीहरु काम नपाएर अलपत्र परेका हुन् । चितवन गीतानगर घर भएका सञ्चालक रविन्द्र अधिकारीले ४५ जना युवालाई ठगेर भागेको पीडितहरूको भनाइ…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 938 939 940 941 942 Older Last ›